एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ, सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ : डा. महत (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
मलाई धेरै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले त भदौमा महाअधिवेशन सुरु हुन्छ र मंसिरमासम्पन्न हुन्छ भनेर भनेका छन् नि ?
नियम तथा कानून मिचेर काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन् । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनु त्यो अपराधिक कार्य हो । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सजाय हुन्छ । सजाय हुनुपर्छ ।